ဆယ်​လီ – Page3– PoPinVdo
စိတ်ကြိုက်လုပ်ပါကွာ (Love Me Like You Do) သီချင်းနဲ့ မှုန်လေးရဲ့ဗီဒီယို
October 13, 2018 popin vdoဆယ်​လီNo Comment on စိတ်ကြိုက်လုပ်ပါကွာ (Love Me Like You Do) သီချင်းနဲ့ မှုန်လေးရဲ့ဗီဒီယို
လတ်တလော ဖေ့ဘုတ်ကမ္ဘာကြီးမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုက ရွှေမှုန်ရတီရဲ့ ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုအကြောင်းပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းကတော့ ဒီဗီဒီယိုကို ရွှေမှုန်ဟာ ရုတ်တရက်တင်ခဲ့ဖူးပေမယ့် ချက်ခြင်းပြန်ဖျက်လိုက်ပြီး ယခုမှ Edit ပြန်လုပ်ပြန်တင်ထားတာပါ။ ၄ မိနစ်ခန့်ရှည်လျားတဲ့ အဆိုပါဗီဒီယိုကို ရွှေမှုန်ရတီကိုယ်တိုင် ဒါရိုက်တာလုပ်ရိုက်ကူးထားပြီး…
October 13, 2018 popin vdoဆယ်​လီNo Comment on ပရိသတ်တွေ အံ့အားသင့်သွားအောင် မိုးရွာရင် မိုးရေချိုးမယ်ဆိုတဲ့ သီချင်းနဲ့ သီဆိုကပြလိုက်တဲ့ အဝင်း
အဝင်းတစ်ယောက် ဂျပန်ကနေ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ရောက်နေပါတယ်နော်။ ပရိသတ်တွေ သိပ်ချစ်ကြတဲ့ အဝင်းတစ်ယောက်ဟာ ယခုဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်နေတာဖြစ်ပြီး Win’s Shooow Time တီဗီအစီအစဉ်သစ်အတွက် မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဝင်းဟာ ဒီ Program အသစ်ကို ဦးဆောင်ဖန်တီးမှာဖြစ်ပြီးတော့ အဝင်းနဲ့အတူ…
October 13, 2018 popin vdoဆယ်​လီNo Comment on မင်္ဂလာသတင်းကို အတိအကျပြောပြလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ ဒါရိုက်တာ ဏကြီး
ဒါရိုက်တာ ဏကြီးနဲ့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသု တို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲသတင်းကိုတော့ အခုလို ကြေညာလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ နှစ်ဦး ဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လ အတွင်းက စေ့စပ်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါရိုက်တာ ဏကြီးနဲ့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသုတို့ဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်…
ကိုယ့်အောင်မြင်မှုကိုကြည့်ပြီး အမြဲတမ်း မျက်ရည်ကျတတ်တဲ့ချစ်သူအကြောင်း ပြောလာတဲ့သူ
October 13, 2018 popin vdoဆယ်​လီNo Comment on ကိုယ့်အောင်မြင်မှုကိုကြည့်ပြီး အမြဲတမ်း မျက်ရည်ကျတတ်တဲ့ချစ်သူအကြောင်း ပြောလာတဲ့သူ
သရုပ်ဆောင်နဲ့အဆိုတော် နန်းစုရတီစိုးတို့ စုံတွဲဟာ ပရိသတ်တွေသဘောကျပြီး အားကျရတဲ့ စုံတွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ခင်စနောက်ပြီးနေတတ်ကြတဲ့ သူတို့စုံတွဲလေးဟာ မကြာခဏဆိုသလိုလည်း ပရိသတ်တွေနဲ့အတူ စကားပြောဖို့ Live တွေလည်းလွှင့်ကြပါတယ်။ မနဲ့မောင်ဇာတ်လမ်းလေးနဲ့ ချစ်ကြပေမယ့် သိပ်ကိုရိုမန်တစ်ဆန်တဲ့အချစ်တွေကြောင့် ပရိသတ်တွေလည်း အမြဲပျော်ရွှင်မှုတွေကို ကူးစက်ခံစားကြရပါတယ်။ …
ဒီနိင်ငံက cele….. အလကားလာလာမေးတဲ့ အင်တာဗျူးတွေကို ဖြေရတယ်. ကြည့်တဲ့သူတွေရဲ့ဆဲတာခံရတယ်..
October 13, 2018 popin vdoဆယ်​လီNo Comment on ဒီနိင်ငံက cele….. အလကားလာလာမေးတဲ့ အင်တာဗျူးတွေကို ဖြေရတယ်. ကြည့်တဲ့သူတွေရဲ့ဆဲတာခံရတယ်..
ဒီနိင်ငံက cele….. အလကားလာလာမေးတဲ့ အင်တာဗြူးတွေကို ဖြေရတယ်. ကြည့်တဲ့သူတွေရဲ့ဆဲတာခံရတယ် ဒီနိင်ငံက cele… ကိုယ့်privacy ကိုဖွင့်ချခံရတယ်. ဝိုင်းအားပေးကြတယ် တပျော်တပါး ဆဲကြ ရှယ်ကြတယ် အားမရသေးဘူး နောက်ထပ် ဘယ်သူ့ကိုပါ ဟက်ပေးပါလို့တောင် တောင်းဆိုကြတယ် ဘာမှလုပ်လို့မရပဲထိုင်ကြည့်နေရတယ်…
တင်အတုပြဿနာကို ဒီလိုလေးဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ အိချောပို
October 13, 2018 popin vdoဆယ်​လီNo Comment on တင်အတုပြဿနာကို ဒီလိုလေးဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ အိချောပို
မင်းသမီး အိချောပို ကတော့ ကိုယ်လုံးလေးအရမ်းလှပြီး ပုရိသတို့ ကြွေနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ပေါ့။သူမ ဟာ ရုပ်ရှင်ကားပေါင်းများစွာရိုက်ကူးနေပြီး ရိုက်တဲ့ကားတိုင်းမှာလဲ ပီပြင်တဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် ပရိတ်သတ်အသည်းကျော်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါတယ်။ လက်တလော သူမ ရဲ့ လှပတဲ့ ကိုယ်လုံးအလှကို အတိုက်အခိုက်ခံနေရပါတယ်။ အိချောပို လို့…
အစ်ကိုဖြစ်သူရဲ့ မေတ္တာနဲ့ပေးတဲ့ အချုပ်ထဲက လက်ဆောင်ကြောင့် မျက်ရည်မိုးစွေခဲ့ရတဲ့ လင်းဇာနည်ဇော်တို့အဖြစ်
October 12, 2018 Funny Popinဆယ်​လီNo Comment on အစ်ကိုဖြစ်သူရဲ့ မေတ္တာနဲ့ပေးတဲ့ အချုပ်ထဲက လက်ဆောင်ကြောင့် မျက်ရည်မိုးစွေခဲ့ရတဲ့ လင်းဇာနည်ဇော်တို့အဖြစ်
ယခု တစ်လော မှာ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ နဲ့ လက်ပူးလက်ကျပ်အဖမ်းခံနေရတဲ့ အမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ အနပညာရှင်တွေလဲမူးယစ်ဆေးဝါးတွေနဲ့ လက်ပူးလက်ကျပ်အဖမ်းခံခဲရပြီး ရွှေထိုက် ရသစတဲ့ နိုင်ငံကျော်အနပညာရှင်တွေလဲ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေနဲ့တကွ အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ နိုင်ငံကျော်ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မိုက်တီးလဲ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေနဲ့အတူ အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ မိုက်တီးအဖမ်းခံရတာကြောင့် အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံး…
သစ်တံခါးကျောင်းတိုက်မှာ ၃ ရက် တရားစခန်း ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ မင်းသွေး ရဲ့ Video လေးကို အလွမ်းပြေကြည့်ဖို့ တင်ပေးလိုက် ပါတယ်
October 12, 2018 Funny Popinဆယ်​လီNo Comment on သစ်တံခါးကျောင်းတိုက်မှာ ၃ ရက် တရားစခန်း ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ မင်းသွေး ရဲ့ Video လေးကို အလွမ်းပြေကြည့်ဖို့ တင်ပေးလိုက် ပါတယ်
ဗီဒီယိုကိုအောက်ဆုံးမှာတွဲတင်ပေးထားပါတယ် လှိုင်သာယာမြို့နယ်မှရှိတဲ့ သစ်တံခါးကျောင်းတိုက်မှာ ၃ရက် တရားစခန်းဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ မင်းသွေး ရဲ့ Video လေးကို အလွမ်းပြေကြည့်ဖို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် သူဟာ ဘာသာရေးကို အတတ်နိုင်ဆုံး လုပ်ခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်သလို Wai Lu Kyaw Foundation နဲ့…
ချစ်သူစိတ်ပူရမယ့် အလုပ်တွေ မလုပ်ဘူးဆို တဲ့ ပိုးအိအိခန့်
October 12, 2018 Funny Popinဆယ်​လီNo Comment on ချစ်သူစိတ်ပူရမယ့် အလုပ်တွေ မလုပ်ဘူးဆို တဲ့ ပိုးအိအိခန့်
မြန်မာနိုင်ငံ က ဘောလုံး အ ချစ်တော် ပရိသတ် တော်တော်များများကတော့ နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင် ကစားသမား အောင်သူကို မသိတဲ့သူမရှိလောက်ပါဘူး။ ထိုင်းလိဂ်မှာ သွားရောက်ကစားနေတဲ့ အောင်သူတယောက်ကတော့ သူမှာချစ်စရာကောင်းတဲ့ ချစ်သူလေးရှိပါတယ်။ သူကတော့ သရုပ်ဆောင်ပိုးအိအိခန့် ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုးအိအိခန့်ကတော့…
October 12, 2018 popin vdoဆယ်​လီNo Comment on ညအိပ်ရင် ဘရာကိုဘာကြောင့် ချွတ်အိပ်သင့်လည်းဆိုတာ သတိပေးလိုက်တဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး
ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ရုပ်ရည်ကြောင့် ပရိသတ်တွေကြားမှာ နေရာရလာတဲ့ မော်ဒယ် မင်းသမီး ဝါဆိုမိုးဦးကတေ့ာ ဘရာဝတ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတ တခုကို ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဝါဆိုမိုးဦးကတော့ မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ ညဘက်အိပ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ ဘော်လီကို ဝတ်ပြီး မအိပ်ကြပါနဲ့လို့…